a - TECHNOMANIAC's - BLOG: July 2008
ကျွန်တော် ကျောင်းကိတ်စ၊ အလုပ်ကိတ်စ၊ လ.၀.က ကိတ်စတွေနှင့် လုံးနေရပြီး စာမရေးနိုင်တာကြာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ပတ် အသစ်တွေထွက်လာတဲ့ AppStore ကသိပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီး စင်္ကာပူမှာရှိတဲ့ အိုင်ပေါ့တပ်ခ်ျ၊ အိုင်ဖုန်းသုံးတဲ့လူတွေအတွက် သိပ်အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ ဒီပို့စ်လေးကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။ iTunes 7.7 ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ သူ့မှာ Security ဘာညာ ကွိကွတွေထက် အရေးကြီးတဲ့ AppStore ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ iTunes Store ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကို သင့် iTunes ကနေ နှိပ်လိုက်တာနှင့် Voila! စင်္ကာပူ စတိုးကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အိုင်ဖုန်းသာ မရှိတာ စင်္ကာပူ ပန်းသီးတရားဝင် စတိုးကိုတွေ့ရတာ ၀မ်းသာစရာပါပဲ။ စင်္ကာပူတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ပန်းသီးစတိုး official မရှိပါဘူး။ အရင်က အွန်လိုင်း SG Store တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ အခု SG App Store တစ်ခုထပ်တိုးလာတယ်ဆိုပါတော့။ Application ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ရှိပြီး ၂၅ရာခိုင်နှုန်းက ဖရီးပါ။ များသောအားဖြင့် ဆိုရှယ်နက်ဝက်ကင်းတွေ၊ ဂိမ်းတွေက ဖရီးပါ။ ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ ဟာတွေလည်း သိပ်ဈေးမကြီးပါဘူး ၄ကျပ် ကနေ ၉ကျပ်လောက်ထိပဲရှိပါတယ်။ အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ အများကြီးရှိနေပြီး ဒီထက်ပိုတိုးလာတော့မှာ မလွဲပါဘူး။
အကောင်းဆုံးက ကျွန်တော့်အကောင့်လေး Activate ဖြစ်သွားတာပါပဲ။ အရင်တုံးကဆို U.S Credit Card (eew!) မရှိလို့ ဘာမှလုပ်မရပါဘူး။ အခုတော့ Successfully Activated ပါတဲ့။
ဘာပဲပြောပြော ဂိမ်းတွေ Application တွေကို အေးအေးဆေးဆေး crack လုပ်စရာမလိုဘဲ၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ကင်းကင်း ထည့်သွင်းကစားလိုတဲ့ အကိုတို့အမတို့အတွက်တော့ လမ်းပွင့်သွားပါပြီ။ =D စမ်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ကြည့်ပြီး အဆင်မပြေတာရှိရင် လက်တို့လိုက်ပါဦး။ ကျွန်တော်ကတော့ အိုင်ဖုန်းကော၊ တပ်ခ်ျကော လက်ထဲမှာမရှိလို့ လောလောဆယ်စမ်းလို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။
Posted by Wai Phyo at7:11 PM0comments